Somaliland oo u hanjabtay ergadii afka duubatay ee ka qeyb gashay doorashada Aqalka Sare | Dalkaan.com
Home Warkii Somaliland oo u hanjabtay ergadii afka duubatay ee ka qeyb gashay doorashada...
Somaliland oo u hanjabtay ergadii afka duubatay ee ka qeyb gashay doorashada Aqalka Sare
Hargeysa (Caasimada Onlin) – Maamulka Somaliland ayaa mar kale ka hadashay doorashada xubnaha Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi ku matalayo Baarlamaanka Soomaaliya taasoo asbuucaan ka dhacday Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
“Reer Soomaaliya waxaan leeyahay, waxaan aad meesha yar ee halka kiilo mitir ee ajaanibku ilaalinayo ku wal walaaqaysaan, kama aqbalayno, inamana qabato in 20 inan oo qarankan ka falaagoobay la yiraa way ina matalayaan, inamana ma talaan ” ayuu yiri Saylici.
“Waxaan aad uga xunahay in Jimciyadii Quruumaha ka dhaxaysay ay markhaati ka noqoto oo ay aaminto in 20 iyo 30 qof oo qarankan falaago ka ah in ay u aragto in ay na matalaan, waxaanu warka ku hayna kuwa indhaha qarsanayay waa kuwo Somaliland ka tagay, oo berri raba in ay soo noqdaan, waa dambiilayaal qaran kuwaasi, yaan la arkin reer Somaliland oo qaylinaya marka berri la xiro” ayuu yiri Saylici.
Previous articleXidiga ugu Feecan Todobaadkan Champions league-ga oo lagu dhawaaqay
Next articleMason Mount, iyo Reece James oo la sheegay Kulanka ay ku soo laabanayaan Chelsea
Liverpool waa inay Mohamed Salah siisaa “wuxuu doono” si uu u saxiixo heshiis cusub, sida uu qabo Jose Enrique. Salah ayaa si qurux...
Lautaro Martinez oo qarka u saaran inuu heshiis cusub u saxiixo...